Otu ndị isi ọrụ nwere ike isi lelee nchịkọta data iji meziwanye arụmọrụ | Martech Zone
Ọnụ ego na-ada na ọkaibe na-eto eto nke usoro nyocha data kwere ka ndị mbido ọhụrụ na obere ulo oru iji nweta abamuru nke nghọta dị elu na nghọta agakwuru. Nchịkọta data bụ ngwá ọrụ dị ike nke nwere ikike ịkwalite arụmọrụ, melite mmekọrịta ndị ahịa ma hụ na azụmaahịa nwere ike ịchọpụta ma dozie nsogbu ndị nwere ike ịdị mfe karịa. Learningmụta ntakịrị ihe banyere ngwa ọrụ ọhụụ yana usoro nyocha na-eme ka a mata na a ga-eleghara ihe ndị kachasị ọhụrụ na ihe ngwọta anya.
Nyocha na Improkwalite Usoro Ọrụ
Effectivezọ ndị dị irè iji chọpụta ma tụọ akụkụ dị mkpa nke arụmọrụ na arụmọrụ nwere ike ịhapụ ndị otu iji meziwanye arụmọrụ na arụmọrụ. Nyocha data ngwanrọ, ọrụ na ngwọta nwere ike inye nghọta na nghọta ka ukwuu banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke arụmọrụ ụbọchị.
Inwe ike ịtọlite ​​ma guzobe akara ngosi dị irè karị ma ọ bụ ịtụle na ịtụle mgbanwe ndị ga-agbanwe tupu mmejuputa iwu nwere ike ịmepụta ọtụtụ ohere maka mmelite na mmezi. Site na nyocha ala site na akụkọ oge, nyocha nwere ike ịrụ oke ọrụ n'ịhụ na arụmọrụ arụmọrụ nwere ike ịmecha kachasị.
Hankwalite Mmekọrịta Ndị Ahịa
Tizụlite nnukwu ndị ahịa ma ọ bụ inwe ike igbo mkpa nke ndị ahịa dị ugbu a na ndị ọdịnihu bụ nsogbu ndị ọ nweghị azụmaahịa nwere ike ịbelata. Enwere ọtụtụ ụzọ enwere ike iji nchịkọta data iji meziwanye mmekọrịta ndị ahịa ma bulie afọ ojuju ndị ahịa. Enwere ike iji ya site na ịmepụta profaịlụ zuru ezu iji tụlee mkpa nke ụdị ndị ahịa dị iche iche na ikike inyocha ozi akaụntụ ndị ahịa iji chọpụta usoro omume na-akpata, nyocha data nwere ike ịnwe nnukwu ego. Inwe nghọta ka mma banyere ndị ahịa ha na-eme ka o doo anya na ụlọ ọrụ achụmnta ego ga-enwe ike ịzụlite na ịnọgide na-enwe mmekọrịta dị mma nke nwere ike iduga n'ọganihu dị ogologo oge.
Ifyingchọpụta Ohere maka Ọganihu
Enweghi nghọta na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịchọpụta nsogbu na ọnọdụ ndị nwere ike ịnwe nrụpụta na arụmọrụ zuru oke. Nchịkọta data na-eme ka ọ dịkwuo mfe ilekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke ọrụ ma ọ bụ iji nyochaa arụmọrụ na ọkwa arụmọrụ n'oge.
Chọpụta akụkụ ọ bụla nke ọrụ nke nwere ike ịchọ nlebara anya ma ọ bụ mmelite na ọsọ ọsọ, ịdị mfe na izi ezi bụ nchegbu na-adịkarị oke mkpa. Ulo oru ndi nwere ike inwe nsogbu na nsogbu ndi nwere ike ime ka ha ghara ichota na-achota na imeziwanye oru ma obu ichota oru oma nwere ike ibu agha.
Na-eji akụ ndị kacha mma
Site na ngwa ngwanrọ na ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ, na-achọ ngwaọrụ kachasị ọhụrụ na nhọrọ kachasị mma nke akụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnụ ụtọ ọtụtụ uru enyere ya nchịkọta akụkọ na oge nyocha. Pointsda ego ọnụahịa jikọtara na usoro nyocha data pụtara na ọbụlagodi azụmaahịa na otu ndị nwere obere ego nwere ike ịchọta ma nweta ihe ha chọrọ.
Ma ọ na-achọ ọrụ na enyemaka nke onye na-eweta nyocha ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnye ma ọ bụ jiri ngwa dijitalụ iji mee ka a mata akụkụ dị iche iche nke nhọrọ ha, azụmaahịa ga-eme nke ọma ịchọ ihe kacha mma na ngwọta.
Ọdịdị na-eme n'ọdịnihu na Nnukwu data
E na nọmba ọ bụla nke ugbu a na ọdịnihu ọnọdụ ndị azụmaahịa ga-abụ ihe amamihe dị na anya ile anya. Nnukwu data na-aghọ ngwa ahịa dị oke mkpa, nke azụmaahịa ole na ole nwere ike ịnwe. Ọnọdụ ụlọ ọrụ ugbu a, dịka akpaaka ebe ọrụ nke nwere ike inye nnukwu data na ozi maka nyocha ma ọ bụ akụrụngwa ngwanrọ nke na-eme ka ọ dị mfe iwepụta akụkọ ma ọ bụ nyochaa ndekọ ndị gara aga, pụtara na azụmaahịa nke oge a nwere ike ịtụ anya ịhụ ọtụtụ ihe nyocha data na ụbọchị na-abịa. Gbaso ijeụkwụ na teknụzụ na-apụta na ịgbalị ịmụtakwu banyere ngwaọrụ na akụrụngwa ọ bụla nwere ike ịpụta n'oge na-adịghị anya nwere ike inye ndị azụmaahịa ezigbo uru na mbọ ha na-eme iji bulie arụmọrụ.
Tags: Analyticsịga n'ihu mmammekọrịta ndị ahịaarụmọrụ ndị isiezigbo oge nchịkọtaọnụ ọgụgụ